Angovo azo avy amin'ny onja: inona izany, toetra sy fomba fiasa | Fanavaozana maintso
Fantatsika fa misy karazana angovo azo havaozina isan-karazany. Avy amin'ny angovo sy ny angovo mafana, ny angovo avy any an-dranomasina. Izy io dia fantatra amin'ny fiovan'ny angovo hafanana sy ny ranomasina. Izy io dia karazana angovo azo havaozina izay mifototra amin'ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana misy eo amin'ny rano lalina sy ireo izay akaiky indrindra ny atiny.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra rehetra, ny fiaviany ary ny maha-zava-dehibe ny angovo any an-dranomasina.
3 Faritra angovo azo avy amin'ny onja
4 Fampidirana tsena
Izy io dia karazana angovo azo havaozina izay mifototra amin'ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana misy eo amin'ny rano lalina sy ireo izay akaiky azy indrindra. Raha ny mahazatra, ny rano lalina kokoa dia mazàna manana mari-pana ambany kokoa ary mafana ny rano manakaiky ny velarany. Amin'izany fomba izany, miaraka amin'ity fahasamihafana eo amin'ny mari-pana ity, ny motera hafanana dia afaka mihetsika sy mamokatra asa mahasoa. Amin'ny alàlan'ity asa famindrana ny motera hafanana ity dia miteraka fomba vaovao azo havaozina ny herinaratra.
Tombony iray ananan'ny tondra-dranomasina noho ny hafa dia ny hoe afaka miasa 24 ora isan'andro. Tsy miankina amin'ny rivotra sy ny toetrandro izany. Ny motera hafanana izay tsy maintsy ahitantsika an'io angovo io amin'ny alàlan'ny fahasamihafana amin'ny maripana dia mekanika mandeha amin'ny bisikileta. Ny mekanisma toy izany dia mahazo hafanana avy amin'ny loharano mafana iray mba hamokarana asa harato ary hanala ny hafanana ho any anaty rano mafana ambany hafanana. Arakaraka ny maha samy hafa ny mari-pana eo amin'ny sosona avo indrindra sy ny rano ambany indrindra no mampisy ny loharanon'ny fiovan'ny angovo.
Ny zava-mitranga ankehitriny miaraka amin'ny lasantsy fosily mahazatra dia lasa mihabe lafo kokoa izy ireo ary tsy dia misy intsony. Noho izany, ezaka be dia be no atao mba hahafahana manao manatsara ny fahombiazan'ny hafanana afaka miasa miaraka amin'ny thermals maripana vitsivitsy. Teknika iray hafa dia misy ny fampiasana tsingerina mitambatra sy cogeneration izay afaka manova ampahany betsaka amin'ny angovo miditra ho asa mahasoa ary, avy eo, ho herinaratra.
Ny tombony azo amin'ny fiovan'ny angovo hafanan'ny ranomasina dia ny mampiditra loharano angovo mora vidy izay misy fatrany tsy voafetra. Tsy toy ny mitranga amin'ny angovo rivotra na angovo avy amin'ny masoandro, fa misy foana ny angovo avy any an-dranomasina. Amin'izany fomba izany dia azo atao ny manana milina mafana manintona izay afaka miasa eo anelanelan'ny loharano hafanana misy fahasamihafana eo amin'ny maripana ampy ahafahana mamokatra herinaratra.
Ny fitaovana ampiasaina amin'ny famadihana ny angovo hafanan'ny ranomasina dia masinina mafana. Ny milina hoy dia natsangana mba hahafahany miasa eo anelanelan'ny mari-pana somary tsara sy ny mari-pana ambany. Ny mari-pana akaiky ny fanambonin'ny ranomasina dia mafana noho ny an'ny halaliny. Raha hanao fanazaran-tena isika, mba hahazoana tombony ny fiovan'ny angovo, dia tsy maintsy misy ny tsy fitovian'ny maripana eo amin'ny tsara tarehy ambonin'ny sy ny atiny 20 degre eo ho eo.
Mba hahatratrarana io fahasamihafana eo amin'ny mari-pana io dia tsy maintsy mitady faritra jeografika ambonin'ny ranomasina izay hafanain'ny masoandro sy izay ny mari-pana eo ho eo dia 30 degre. Amin'izany fomba izany dia manome toky izahay fa ny mari-pana amin'ny halalin'ny 900 metatra dia 5 degre.
Faritra angovo azo avy amin'ny onja
Hojerentsika hoe iza avy ireo faritra ahafahana mamokatra angovo be indrindra avy any an-dranomasina. Ireo faritra miorina amin'ny tropika dia manana fahasamihafana lehibe kokoa amin'ny mari-pana amin'ny ranomasina satria fiasa lalina. Andao hojerentsika hoe inona ny mari-pana amin'ny maha-fiasa ambonin'izy ireo:
Temperatura ambonin'ny: matetika dia mahatratra 200 metatra ny hateviny ary manao toy ny mpanangona hafanana. Eto dia mazàna manodidina ny 25-30 degre ny mari-pana.
kafa: eo anelanelan'ny 200-400 metatra ny halaliny ary misy fiovaovan'ny hafanana haingana. Io fiovan'ny maripana haingana io dia manakana ny elanelam-potoana sy ny atiny.
Lalina: mihena ihany ny maripana mandra-pahatongany any amin'ny 4 degre amin'ny 1000 metatra ary 2 degre amin'ny 5000 metatra.
Ao amin'ny ranomasina tropikaly dia misy fahasamihafana lehibe amin'ny mari-pana eo ambonin'ny ambonin'ny sy ny halalin'ny 1000 metatra. Araka ny efa noresahintsika teo aloha, mba hahomby amin'ny toekarena ity dingana ity dia hitaky fahasamihafana amin'ny filaharan'ny 20 degre. Amin'ity fahasamihafana eo amin'ny mari-pana ity dia azo ampiasaina ny angovo hamily motera hafanana. Ireo faritra ireo dia tsy misy afa-tsy amin'ny latitude akaikin'ny Equator, izay misy any amin'ny faritry ny Oseana Pasifika. Misy ihany koa ny faritra lavorary amin'izany, toy ny atsinanana sy andrefan'i Amerika afovoany ary ny faritra lavitra sasany amin'ny morontsiraka atsimon'i Etazonia sy atsinanan'i Florida.
Hatramin'izao, saika ny tolo-kevitra rehetra misy eto amin'izao tontolo izao momba ny angovo onjan-dranomasina dia mbola tsy nanao ny diany. Ary io dia mbola tsy misy prototype fanandramana ireo zavamaniry ara-barotra toa ny angovo rivotra. Somary lehibe ny vidiny ary tsy mbola azo tantanana tsara. Mila mieritreritra fotsiny ianao fa ny tariby mandeha any an-dranomasina dia ho tompon'andraikitra amin'ny fitantanana angovo mankany amin'ny tanibe. Tsy maintsy raisina fa ny fanambanin'ny ranomasina dia tontolo manimba izay mety manimba hatrany ny tariby.
Betsaka ny orinasa mifantoka amin'ny fampandrosoana vahaolana vaovao sy mahomby hahafahana manararaotra ny hery mety hananan'ny angovo tafakatra. Tsy misy zavatra hafa mieritreritra fa mety ho angovo tsy manam-petra sy azo havaozina izy io. Ny eritreritra fotsiny ny fomba hanaovana an'io karazana angovo mahomby io sy ahazoana tombony ara-toekarena. Angovo tsy mandoto, voafetra ary azo havaozina rehefa mandeha ny fotoana. Eritrereto fotsiny izany.
Araka ny hitanao, ny angovo avy amin'ny onja-dranomasina dia iray amin'ireo angovo azo havaozina izay eo an-dàlam-pamokarana nefa manana tanjaka lehibe amin'ny ho avin'ny angovo madio. Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny angovo avy any an-dranomasina sy ny fomba fiasan'izy ireo ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo tondra